ခရစ္စတလ်ရဲ့ ဘဝစာမျက်နှာ ...။: January 2013
ဘန်ကောက်မြို့မှ လေဆိပ်အဟောင်း ~~~ ဒွန်မောင်း (Don Mueang Airport)
ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်က မြန်မာတစ်ယောက် ထိုင်းကို အလည်မလာခင် ကြိုဖုန်းဆက်ပါတယ်။ သူဖုန်းခေါ်တာ အင်တာနက်ကလို့ ပြောပါတယ်။ ကြားတစ်ချက်မကြားတစ်ချက်နဲ့။ ပြန်ခေါ်ဖို့ကလည်း သူ့ဖုန်းနံပါတ်ကို မသိ။ မြန်မာနိုင်ငံသားတွေအနေနဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံ ဘန်ကောက်မြို့မှာ လေဆိပ်နှစ်ခုလုံး ပြန်လည် အသုံးပြုနေပြီဆိုတာ သတိမထားမိကြပါဘူး။ ကိုယ့်နိုင်ငံသားတွေအပြင် နိုင်ငံခြားသားတွေလည်း သတိမထားတဲ့သူတွေလည်း ရှိပါတယ်။ လေယာဉ်ဆိုက်ပြီး ဆင်းလာမှ Air Asia နဲ့ လာတဲ့အခါ ဒွန်မောင်းလေဆိပ်ဟောင်း (Don Mueang Airport) ကို ရောက်နေပါလားလို့ သိကြပါတယ်။
ဒွန်မောင်းလေဆိပ်ဟောင်း (Don Mueang Airport)မှာ Air Asia International နဲ့ Nok Airway Domestic လေကြောင်းလိုင်းတွေနဲ့ ကုန်တင်လေယာဉ်တွေ အသုံးပြုပါတယ်။ မနှစ်ရေကြီးတုန်းက ဒွန်မောင်းလေဆိပ်ဟောင်း (Don Mueang Airport)ထဲကို ရေတွေ တော်တော်ဝင်ခဲ့လို့ ထိုင်းမှာ ရေကြီးတာ လေဆိပ်ထဲတောင် ရေတွေ ဝင်တယ်ဆိုပြီး နာမည်ကြီးသွားသေးတယ်။ တကယ်တော့ လေဆိပ်အသစ်ကြီးထဲ ရေမဝင်ခဲ့ပါဘူး။ လေဆိပ်အဟောင်းနဲ့ အသစ် ရောကုန်ကြတာပါ။
ခုန ထိုင်းကို အလည်လာမယ့် ဧည့်သည်အကြောင်း ဆက်ရရင် သူပြောတာ ကိုယ်မကြား၊ သူကလည်း white card ဖြည့်ဖို့ လိပ်စာသာ အဓိကတောင်းနေပါတယ်။ ကိုယ်ကလည်း ကြိုရမှာဆိုတော့ (ထိုင်းမလာဖူးလို့ မဖြစ်မနေ လေဆိပ်လာကြိုပေးပါတဲ့၊ အမျိုးသမီးကြီးလည်း ဖြစ်နေတော့ ကိုယ်တိုင် သွားကြိုပေးရပါတယ်။) လေကြောင်းလိုင်း၊ နေ့ရက်နဲ့ အချိန်ကို မေးရပါတယ်။ ဖုန်းက ပြတ်သွားချိန် ...နေ့ ... ဟိုဘက်က ဘာပြောတယ် မသိဘူး ကိုယ်ကြားတာကတော့ ဒီနေ့လို့ကြားပါတယ်။ အချိန်မေးတော့ ညနေ ....တဲ့ လေကြောင်းလိုင်းဆိုတော့ မြန်မာလေကြောင်းပဲလေတဲ့။ သူ့ကြည့်ရတာ လက်မှတ်ကြည့်ပြောနေတာဟုတ်ပုံမရဘူး၊ သေချာလားလို့ ထပ်မေးတော့ ဖုန်းက ကျသွားတယ်။ ပြန်ခေါ်တယ် မကြားရပြန်ဘူး။ နောက်ဆုံး ထပ်ခေါ်တော့ ဘာလက်ဆောင်ယူလာရမလဲ မယူလာပါနဲ့ အားနာတယ် ပြောရုံရှိသေး ဖုန်းက ကျသွားပြန်ရော .......... ဖုန်းလည်း ပြန်မခေါ်တော့ဘူး။ သူနဲ့ ပြန်ပြီး confirm မလုပ်လိုက်ရဘူး။ ဒီနေ့ ကြိုဆိုတော့လည်း ကြိုတာပေါ့၊ အလုပ်များနေတာတွေ ခပ်မြန်မြန်အပြီးသတ်ပြီး သွားရမယ့်အချိန်ကို စဉ်းစားမိတော့ လေယာဉ်ချိန်ကို သတိထားမိလိုက်တယ်။
လွဲနေပြီ၊ ကိုယ်ကလည်း လေယာဉ်လက်မှတ်ရောင်းနေတဲ့သူဆိုတော့ လေယာဉ်အချိန်ကို သိတာနဲ့ ထိုင်းကို ဘယ်အချိန်တွေမှာ ဘယ်လေယာဉ်တွေ ဆိုက်တတ်တယ်ဆိုတာ အလွတ်ရနေတယ်...။ ဧည့်သည်ပြောတဲ့ လေကြောင်းလိုင်းနဲ့ အချိန်လွဲနေပါတယ်။ ဒီလိုလွဲလိုက်ခြင်းက လေဆိပ်နှစ်ခု ကွဲထွက်သွားတယ်။ မြန်မာလေကြောင်းလိုင်း MAI ဆိုရင် လေဆိပ်အသစ်မှာ ကြိုရမယ်။ လေယာဉ်ချိန်အရဆိုရင် Air Asia နဲ့ လာမှာဖြစ်ပြီး ဒွန်မောင်းလေဆိပ်ဟောင်း (Don Mueang Airport)ကို ဆိုက်ရောက်ရမှာဖြစ်နေပြီ။
ပြည်တွင်းလေကြောင်း Nok Airway
ဘာလုပ်ရင် ကောင်းမလဲ...၊ သူက မြန်မာလေကြောင်းပြောမှတော့ လေယာဉ်ချိန်မှားနေတာပဲဖြစ်မယ်ဆိုပြီး MAI ဆင်းမယ့်အချိန်သွားကြိုလိုက်ပါတယ်။ လေယာဉ်ဆိုက်ပြီး အများဆုံးတစ်နာရီကြာရင် ကြိုနေတဲ့သူတွေ ရှိတဲ့နား ရောက်ကို ရောက်ရပါတယ်။ အခြား အထူးအထွေမရှိရင်ပေါ့ (ဥပမာ- မုန်တိုင်းရှိတဲ့နေ့ လေယာဉ်ချိန်နောက်ကျလို့ ပုံမှန်ချိန်မရောက်တာတွေလည်း ရှိသေးတာကိုးးး)။ ၂-နာရီကြာတဲ့အထိ ဧည့်သည်ရောက်မလာဘူး။ အလွဲကြီး လွဲပြီမို့ မိုးချုပ်ချုပ် အိမ်ကို အမြန်ပြန်ရပါတော့တယ်။ စိတ်ထဲမှာတော့ လွဲတာ တစ်ခုခုဖြစ်ရင်ဖြစ်၊ မဖြစ်ရင် information တွေ လိုချင်လို့လည်း ဒီလိုလုပ်တတ်ကြဖြစ်လို့ ထားလိုက်ပါတော့လေဆိုပြီး ခေါင်းထဲက ထုတ်လိုက်ပါတယ်။
နောက်သုံးရက်နေတော့ နိုင်ငံခြားသားတစ်ယောက် ဖုန်းဆက်လာပါတယ်။ အီးလို မပီတပီနဲ့ နင် ... စကားတတ်လားတဲ့၊ နင် မြန်မာလား မေးတယ်။ မြန်မာဆိုရင် နင် ... ကို သိလား၊ ဒီနေ့ သူလာမယ်လို့ ဖုန်းဆက်ပြောပါတယ်။ သူမေးတဲ့ ... စကားကို အနည်းငယ်ပြောတတ်သော်လည်း နားမလည်ဘူးလို့ အီးလိုဆက်ပြောခိုင်းလိုက်တယ်။ ဟိုဘက်က ရီတယ် ငါ .. အီးလို မပြောတတ်ဘူးတဲ့။ သူပြောတဲ့ အီးစကားကလည်း ဝဲလိုက်တာ (ဝဲဆို သီရိလင်္ကာနိုင်ငံသားတဲ့၊ နောက်မှ သိရတယ်။)
သူပြောတဲ့ မြန်မာဆိုတာ ကိုယ်နဲ့ လွဲနေတဲ့ ဧည့်သည်ဖြစ်နေပါရော ...။ ကျေးဇူးကြီးလှပါပေရဲ့ မောင်မင်းကြီးရယ်။ ဒါနဲ့ သူက လေကြောင်းလိုင်း နံပါတ်ကို ပြောတယ် ထူးထူးဆန်းဆန်း အချိန်တွေလည်း မပြောပဲနဲ့၊ ဖြစ်ပုံများ အဲလို။
လေကြောင်းလိုင်းနံပါတ် သိရတော့ သေချာသွားပြီ Air Asia နဲ့ မြန်မာနိုင်ငံက လာမယ်ဆိုတာ။ ဧည့်သည်ကို လေဆိပ်ဟောင်းမှာ ကြိုရမယ်ဆိုတာ သူသိပြီး ထင်လို့ ပြောမနေတော့ဘူး။ နိုင်ငံခြားသားတွေမဟုတ်လား ကိုယ့်ထက်တော့ ပိုသေချာမယ် ထင်ထားလိုက်တာ။
သွားကြိုရမယ့်အချိန်ကျတော့ အဲ့ဒီသီရိလင်္ကာနိုင်ငံသားတွေ ဖုန်းဆက်လာတယ်၊ သူတို့ ဂိတ်နံပါတ်-၅မှာ ရောက်နေပြီပေါ့လေ၊ နင်မရောက်သေးဘူးလားတဲ့။ သွားပြန်ပြီ သူတို့လည်း မှားပြီး လေဆိပ်အသစ်မှာ သွားကြိုနေပြန်တယ်။ ထိုင်းနိုင်ငံ၊ ဘန်ကောက်မြို့မှာ လေဆိပ်နှစ်ခုရှိကြောင်း၊ အီးလို formal ပြောကြည့်တယ်၊ မရဘူး၊ broken ပြောတယ် မသိပြန်ဘူး။ သူ့စိတ်ထဲမှာ Don Mueang ဆိုတာကို နားမလည်နေတာ။ နောက်ဆုံးတော့ ဧည့်သည်နဲ့ တွေ့ပြီးရင် နင့်ကို ဖုန်းပြန်ခေါ်လိုက်မယ်ဆိုပြီး ဖုန်းချလိုက်ရတော့တယ်။ လေဆိပ်ဟောင်းမှာ လူက ခပ်ရှင်းရှင်း၊ ကြိုတဲ့လူတွေထဲမှာ ကိုယ်တစ်ယောက်တည်း ယောက်ယက်ခတ်နေလို့ မတော်ဘူး မဟုတ်လား။ သူနဲ့ ဖုန်းပြောပြီး ရှုပ်ယှက်ခတ်နေတဲ့အချိန်မှာပဲ ဧည့်သည်က လာကြိုတဲ့ဘက်ကနေ ပြည်တွင်းဆိုက်ရောက်ဘက်က လူစည်နေတော့ နေရာမှားပြီး ဟိုဘက်ထွက်သွားပြန်တယ်။ နေရာကလည်း ဝေး၊ လှမ်းခေါ်လို့လည်း ကြားနိုင်မည်မဟုတ်၊ လူအုပ်ထဲ တိုးဝင်သွားလိုက်တာ ဘယ်ရောက်သွားမှန်းတောင် မသိဘူး။ နောက်ဆုံးတော့ ဖုန်းခေါ်ပါစေလို့ပဲ ဆုတောင်းနေရတော့တယ်။ လေဆိပ်ထဲမှာ စောင့်ကြပ်နေတဲ့ နတ်တွေ အစောင့်တွေကိုလည်း မေတ္တာလှမ်းပို့ပြီး ဧည့်သည်ဘက်က တစ်ခုခု ဆက်သွယ်လာပါစေလို့သာ စိတ်မှန်းနဲ့ ဆုတောင်းနေမိပါတယ်။
ဧည့်သည်တစ်ယောက်အနေနဲ့ စကားအခက်အခဲ ခရီးသွားဖူးတဲ့ အတွေ့အကြုံနည်းမယ်ဆိုရင် မလာခင် သေချာမှုတွေ ပြုလုပ်စေချင်ပါတယ်။ ခုတော့ သူလည်း စိတ်မော လူမော၊ ကိုယ်လည်း စိတ်မောနဲ့။ နောက်ဆုံး ထိုင်း tour guide တစ်ယောက်က ဖုန်းဆက်ပြောပေးလို့ ဧည့်သည်နဲ့ တွေ့သွားပြီး သူ့ကို ကြိုလာရပါတော့တယ်။ ဧည့်သည်နဲ့ သိတဲ့ သီရိလင်္ကာနိုင်ငံသားတွေကိုလည်း ဟိုဘက်လေဆိပ်မှာ၊ သူတို့ မှားကြိုမိမှန်း ဖုန်းဆက်လာပါတယ်။ သူတို့ကိုလည်း ဟိုတယ်သာ ပြန်ခိုင်းလိုက်ရတော့တယ်။ လေဆိပ်အသစ်နဲ့ အဟောင်းက ဘန်ကောက်မြို့ရဲ့ အရှေ့ အနောက်ဖြစ်နေလေတော့၊ သူတို့ လေဆိပ် မှားမှန်းသိတဲ့အချိန် ဧည့်သည်က တက္ကစီကားပေါ်ရောက်နေပါပြီ။ အချက်အလက်အမှားတွေ အလွဲတွေနဲ့ တွေ့ရတဲ့ ဒီဧည့်သည်ကိုတော့ မေ့လို့ရမယ် မထင်ပါဘူး ......... :)
အလွဲများနဲ့ တစ်နေ့တာလို့ ခေါင်းစဉ်တပ်လိုသော်လည်း information တစ်ခုကို sharing လုပ်ချင်လို့ ခေါင်းစဉ်ကိုတော့ ပြောင်းထားပါတယ်။
အပေါ်စီးက ဓာတ်ပုံရိုက်ထားတာပါ။ ကြိုမယ့်သူနဲ့ ဧည့်သည် တွေ့ဆုံနိုင်ကြစေဖို့ပါ။
ထိုင်းနိုင်ငံနဲ့ ပတ်သတ်သမျှ ဖုန်းနဲ့ ဆက်မေးကြ၊ အီးမေးနဲ့ မေးကြတဲ့သူတွေ အားလုံးအတွက် ရည်ရွယ်ပြီး ရေးပေးလိုက်ပါတယ်။
Posted by Crystal at 10:51 AM7comments
Labels: Bliss of Us
Here I am...this is me
There's no where else on Earth I'd rather be
Here I am... it's just me and you
And tonight.. we make our dreams come true
It'sanew world ...it'sanew start
It'sanew day... it 'sanew plan
I've been waiting for you ...
Here I am ~~~
Here we are ... we've just begun
And after all this time our time has come
Ya ~~~ here we are.. still goin' strong
waiting for you ...
Here I am ... this is me
And tonight.. we make our dreams ..come true
It'sanew world ... it'sanew start
Here I am next to you
And suddenly the world is all brand new
Here I am~~~
Now there's nothing' standing in our way
Posted by Crystal at 7:12 PM2comments
ဘန်ကောက်မြို့မှ လေဆိပ်အဟောင်း ~~~ ဒွန်မောင်း (Don ...